Ngwa akụrụngwa, Bioaerosol Ngwaọrụ metụtara - Junray
Anyị na-enye onyinye kacha mma kacha mma
Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd. hiwere na August 2007. Ọ bụ mba otutu elu-tech enterprise nke na-elekwasị anya na R&D nke ịchọpụta ngwá. Anyị na-enye ngwa ọrụ na ọrụ nchekwa na ntụkwasị obi na nyocha gburugburu ebe obibi, nyocha nchekwa, mmụba na mmezi.
Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd nwere ọrụ R&D zuru ezu na ikike, ugbu a nwere ngalaba 8 gụnyere teknụzụ, ụlọ nyocha, igwe, imepụta ụlọ ọrụ, imepụta usoro nnwale, yana ọnụ ọgụgụ karịa ndị ọrụ 90.
ZR-1006 Nkpuchi Ihe Ntughari Ntughari Nzuzo ...
ZR-2021 Nnukwu ihe na-eme ka ihe na-eme ka ikuku na-arụ ọrụ na-etinye aka na nchịkọta microbe.
ZR-2050A airborne microbe sampler bụ nnukwu arụmọrụ otu ogbo ọtụtụ oghere mmetụta mmetụta sampler.
ZR-1013 Biosafety kabinet quality ule ZR-1013 Biosafety kabinet àgwà ule
A tọhapụrụ ngwa ọgụ ọhụụ maka ọrịa na-efe efe, nkpuchi filtration arụmọrụ tester!
ZR-1006 Model A (Salt) / Model B (Oil) mask particulate filtration arụmọrụ na ikuku mmiri na-eguzogide onye nyocha dị maka nlekọta dị mma na ebe nyocha maka ngwaahịa ọgwụ, ụlọ ọrụ maka njikwa ọrịa, ụlọ nyocha nyocha akwa, ụlọ ọgwụ, ihe mkpuchi R&D na .. .
Science popularization 丨 Ngwọta maka nchekwa nchekwa nchekwa nchekwa sitere na Junray
JJF 1815-2020 mmezi nkọwapụta maka Class ll biosafety cabinets Biosafety kabinet (BSC) bụ a na-ezighị ezi nsogbu nzacha na ventilating kabinet, nke nwere ike igbochi ọrụ na gburugburu ebe obibi si na-gụrụ na ndu po ...